Help:Contents/Fayyida Barrefamotta Gubba 2 - Wikipedia
Help:Contents/Fayyida Barrefamotta Gubba 2
FBG2 Fayyidaan Barrefamotta Gubba 2ffan kan tajajilamuu akkataa garagaratiin ta'uu danda'a, kuniis maniin akka fuula sunii irratti argamuut hunda'uun. Kaneenis:
Barrefamaa (Article)[gulaali | lakkaddaa gulaali]
Barrefami tokko yokan Articlen tokko yoo fuula suni irratti jiratte kaneenitti argamu:
Article - kunis fuuli kuni akka barrefama yokan article akka ta'ee ibsaa.
Marii - Wa'ee fuula sunii mari'achuu yoo barbadee, marii kan jedhuu tuqii, bakka duwwa banamutti wa'ee mari'attu barressi.
Barressu - Fuula sunii barressu yokan jijjiru yoo barbadaan, barressu kan jedhuu tuqaa.
Seena - Seena fuula sunii yokan jijjiramenni fuula sunii irratti tasifamanii ilaluuf, seena kan jedhuu tuqaa.
Eegu - Kutta kana barresitotta hin barbachisnee irra eegu yoo barbadanii, eegu kan jedhuu tuqaa. Kanaas akka lammatti eegu dandettu, Edit fi Move. Move kan jedhuu fayyadamuffi, duraan banaa tolchuu qabdu, kanaas kan gotaan boksii unlock move permissions jedhuu fillachuun.
Edit - Kunii akka namii hin barresinne tasisuuf. Duraan yoo fuula kana bantanii bakka Editn jalatti (default) kan jedhamutti fillatame argama, kuniis fuuli kunii nama hundaan jijjiramu ni danda'a jechuu dha. Fayyadamtotta username yokan accountii hin qabne qofaa dhorkuuf block unregistered users kan jedhuu filladha. Haa ta'u malee yoo atii accountii hin qabanee kana gochuun, atiis akka jijjiru hin dandenne sii tasisaa. Fayyadamtotta sysops hin tanee yokan bulchotta (adminstrators) kan hin tanee dhorkuuf sysops only kan jedhuu filladha. Yoo barrefamii tokko sysops qofaa tasifame, fuleen fulaa suniin walit qabataan hundaa cufuunis ni danda'ama, kana gochuuf sysops only kan jedhuu yoo filatanii, boksiin Protect pages included in this page (cascading protection) jedhamuu bana ta'a, suni filladha.
Move - Kunii akka namii maqaa fuula sunii hin jijjirne tasisuuf. Duraan yoo fuula kana bantanii bakka Move jalatti (default) kan jedhamutti fillatame argama, kuniis fuuli kunii nama hundaan maqaan jijjiramu ni danda'a jechuu dha. Fayyadamtotta username yokan accountii hin qabne qofaa dhorkuuf block unregistered users kan jedhuu filladha. Haa ta'u malee yoo atii accountii hin qabanee kana gochuun, atiis akka maqaa jijjiru hin dandenne sii tasisaa. Fayyadamtotta sysops hin tanee yokan bulchotta (adminstrators) kan hin tanee dhorkuuf sysops only kan jedhuu filladha.
Beksisaa:- Ergaa xumurtanni bodaa kutaa sunii ilaluu yoo barbadanii boksii Kutaa kanaa ilalli jedhuu filladhuu. Hanga yomii eegumsii kunii akka turuu beksisuuf Expiresiin bodaa boksii argamutti guyya dhumatuu guttaa. Kuniis akkanatti Guyya, Guyya(lak.) Ji'a Wagga Yeroo (sa'a:daqiqaa:sekondii) GMT fakkena Sat, 30 Jun 2007 00:00:00 GMT yokan immo salphati Ji'a Guyya Wagga guttaa fakkena June 30 2007. Akka eegumsii kunii yomiille kana hin dhumanee tasisuu yoo barbadanni boksii Expiresiin bodaa argamutii infinite jedhaa guttaa. Waan jetaan yoo qabataanni immo boksii commentii jedhuun bodaatti argamutti gutta. Yoo xumurtanii Confirm kan jedhuu tuqaa.
Ballesu - Fuula suni ballesuf, ballesu kan jedhuu tuqaa. Boksii Reason for deletion bodaa argamutti, maniif akka ballesitanii ibsaa. Kutaa suni ilaluuf, boksii kutaa kanaa ilalli jedhuu filladha. Yoo xumurtanii bodaa delete page kan jedhuu tuqaa.
Beksisaa:- Haa ta'u malee barrefamii tokko kankee yoo hinta'iin lafa katee hin ballesinni, ballesu irra nama waan sunii barresetti ballesaa fi dogongorra jiruu itti himuudhan akka jijjiru yokan akka ballesuu itti himuu dha.
Bakka Bira Gessu' - Fuula tokko maqaa yokan mataa duree jijjirufi bakka bira gessu kan jedhuu tuqaa. Achiin bodaa bakka Gara mataa duree hara jedhutti, kan jiruu ballessaa, mataa duree harra barresaa. Bakka sababa jedhutti, maliif akka ballesitanii ibsaa. Kutaa sunii ilaluufi boksii kutaa kanaa ilalli jedhuu filladha. Yoo xumurtanii bodaa fuula dabarsi kan jedhuu tuqaa.
Ilalu - Kunii jijjirama fuula sunii irratti tasifamuu hunda bekku yoo fetanni ilalu kan jedhuu tuqaa. Fuula hundaa ilalun bayee barbachisaa dha. Fulaa saneen irratti jijjirami yoo godhame bakka tartibba-jijjirama kiyya jedhutti ilaluu ni dandettu.
Unwatch - Kunii kan jirattu fuuli suni ilalu irratti yoo olkawamee jiratee dha. Kuniis kan tajajilamuu, yoo fuleen atii ilalattu kessa fulaa suni basuu fette dha, kunis unwatch kan jedhuu tuqunii. Asiin bodaa fuuli suni yoo jijjirame bekuu hin dandettu jechuu dha.
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Help:Contents/Fayyida_Barrefamotta_Gubba_2&oldid=7374" irraa kan fudhatame
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 23 Waaxabajjii 2007, sa'aa 00:28 irratti.